Accueil > Articles > TAMBAZOTRA « VAHOAKA MALAGASY MIFEHY NY TANINY ILAINY HAMOKARANA » - Antso (...)
DECLARATION / FANAMBARANA »
publié par Admin, le mardi 30 décembre 2008
Midadasika be “sahabo atsasaky ny tontalin’ny faritra mahavokatra ao Madagasikara” ny faritra ahofa. Manamafy ireto mpanofa fa tsy hisy vola halohany fa ny lany amin’ny fampitaovana ("infrastructures") takian’ny fanatanterahana ny lahasa no ho hofany.
Nanambara ny tompon’andraikitra mivantana ao amin’ny governemanta sy ny solontenan’i Daewoo any Madagasikara fa tsy marina ilay vaovao satria mbola vao eo an-dalam-piraharahana ny roa tonta. Ny tatitra avy any amin’ny faritra samihafa any ifotony anefa dia samy milaza fa efa roso dia roso amin’ny fantanterahana ireo manam-pahefana. Madagascar Futur Entreprise Group, solontenan’i Daewoo any an-toerana, dia efa nahazo 94 182 hekitara any amin’ny distrikan’i Brickaville, 33 767 hekitara ao amin’ny distrikan’i Toamasina II, 40 000 ao amin’ny an’i Vatomandry, mihoatra ny 50 000 ao amin’ny an’i Maintirano. Misy fangatahan-tany hafa efa napetrany koa. Ary re fa any amin’ny faritr’i SAVA dia efa misy tany midadasika vokasika koa.
Manamarina ireo vaovao nivoaka tamin’ny gazety Malagasy ny mponina any an-toerana satria nahita maso na nandre resaka momba ny fisian’olona Aziatika tonga nandrefy tany niaraka tamin’ny mpiandraikitra ao amin’ny faritra satria hono hofainy ilay tany.
Nanjaka tanteraka ny kitranoantrano ary tsy nisy ny mangarahara avy amin’ireo manam-pahefana.
Nisy mpiandraikitra any amin’ny tanàna samihafa niray petsapetsa
Tsy sahy miresaka ny sasany fa matahotra ny veli-kibay
Nisy kosa tsy nahatakatra mihintsy ny faharetan’ny fanofàna ny ny andinidininy ary ny fiantraikany aminy sy amin’ny mponina fa nieritreritra fa hitondra tombotsoa ho an’ny tanàna sy ny faritra ilay raharaha
Tsy azo ekena ity fanofàna tany 99 taona amin’i Daewoo ity satria :
Velaran-tany midadasika tsy hita noanoa any amin’ny faritra maro no voakasika. Manohitohina ny fahafahan’ny Malagasy hanana tanindrazana atsy ao aoriana kely izany. Amin’ny Malagasy anefa "masina" ny tanindrazana nolovaina tamin’ny razambe.
Handrombina ny tany fananan’ny fianankaviana maro sy ny ankamaroan’ny tantsaha atsy ho atsy, ity fifanarahana ity : ny tany anefa no fototry ny fonenana sy ny asan’ny tantsaha ahafahany mivelona,
Natao an-tsokosoko tsy ho fantatry ny olom-pirenena Malagasy rehetra io fifanarahana io ary tsy nanaja ny fomba fiasa araka ny lalàna manan-kery anefa mahafaoka ampahany lehibe amin’ny firenena ka misy fiantraikany amin’ny fiandrianam-pirenena.
Poa toa izay dia nahazo izay velaran-tany midadasika niriny ny orin’asa Daewoo nefa ny Malagasy mijaly fadiranovana mandritry ny taona maro vao mahazo ny taratasy rehetra ilaina amin’ny fanoratana tany rehefa miroso amin’izany,
Tsy ho lasa sakafon’ny Malagasy ny vokatra karakarain’i Daewoo fa haondrana any Korea Atsimo avy hatrany,
Vao mainka mampitombo ny ahiahy mafy ny mahita amin’ny gazety iraisam-pirenena fa hamboleny katsaka hono ny tany midadasika any Menabe sy Melaky. Ny katsaka anefa malaza ho mifoka ny rano anaty tany ary ny masom-boly hafarana any Costa-Rica sy Etazonia dia tsy azo antoka hoe OGM sa tsia. Zarina (« palmiers à huile ») kosa no toa ho voleny any SAVA ary toa hafarana any Indonezia ny masom-boly sy zana-kazo : misy zarina malaza ho mpanimba ny zava-boahary manodidina anefa any amin’io tany io.
Manoloana ireo tranga samihafa manodidina ny raharaha Daewoo ireo,
Dia nijoro ny TAMBAZOTRA « VAHOAKA MALAGASY MIFEHY NY TANINY ILAINY HAMOKARANA » hiara-hiasa :
Hiangavy ny tompon’andraikitra amin’ny ambaratonga rehetra nandray anjara tamin’ity soritr’asa fampanofàna tany ity mba hampitsahatra izao ankehitriny izao ny asa sy "procédures" efa miroso rehetra ka hamerina handinika tanteraka ny antsipirian’ny fifampiraharahana,
Hitaky ny manam-pahefana sy tompon’andraikitra rehetra mba hanaja ny lalàna sy "procédures", indrindra ireo mahakasika ny fampahafantarana ny besinimaro mponina ao amin’ny fokontany sy ny manodidina ny fikasàna hamaritra tany izay tsy maintsy hatao mba ahafahan’izay manana antony hanaovana izany hanohitra sy hanao fanambaràna,
Hitaky amin’ny manam-pahefana Malagasy ny mangarahara tanteraka ka hampahafantra ny vahoaka manontolo ny andinidininy sy antsimpiriany momba ity fifampiraharahana ity,
Hitaky amin’ny Fanjakàna Malagasy sy ireo manam-pahefana rehetra tompon’andraikitra, olom-boafidy sy lehibe ao amin’ny sampan-draharahan’ny famaritana tany ("domaines"), mba hanamora ny fahazoan’ny Tantsaha Malagasy tany sy taratasy fanamarinana ny fananan-tany momba ny toerana tiany hamokarana ary hametraka fepetra sy soritr’asa hanampiana azy ireo hampivoatra ny fitaovana ampiasainy sy fomba fiasany ary ny vokatra azony,
Hifanatona amin’ny olom-pirenena sy tantsaha Malagasy ka hanohana sy hampahery azy amin’ny tolona sy ady ataony ho fiarovana ny taniny,
Hanao antso avo amin’ny mpiray tanindrazana rehetra any Madagasikara sy aty am-ivelany hiambina sy ho mailo ka hanohitra izay fanapaha-kevitra na fanandramana rehetra handrombina tsikelikely amin’ny Malagasy ny tanin-drazany ho fanaikena ny fenitry ny fanatontoloana liberaly,
Hampandre ny vahoaka eran-tany sy hiantso ny mponina avy amin’ny tany hafa hiharan’ny olana toy izao mha hiara-hisalahy sy handrindra ny asa ahatongavana amin’ny fitsaharan’izao endrika vaovaon’ny fanjanahan-tany izao.
Parisy, faha-29 desambra 2008
Lisitry ny mpanasonia ity Antso Avo ity :
Ralava Beboarimisa, Cadre bancaire, Paris, France
Samuel Jocelyn, Informaticien, Paris, France
Philippe Randrianarimanana, Journaliste, Paris, France
Mamy Rakotondrainibe, Chercheur, Paris, France
Jean-Claude Rabeherifara, Sociologue, Paris, France
Noely M’Changama, Citoyenne, Paris, France
Augustin Andriamananoro, Directeur de Publication, Paris, France
Raharimanana, Ecrivain, Paris, France
Tafika Rakotomavo, Enseignant, Paris, France
Claude Parsotam, Retraité, Clermont-Ferrand, France
Philippe Rajaona, Informaticien, Paris, France
Hyacinthe Befeno Todimanana, Finance & Control Manager, Paris, France
Hetsika Diaspora France, association, Paris, France
Eddie Fernand, Directeur administratif, Paris, France
Ericka Minazara, Doctorante, Paris, France
José Landry, Fonctionnaire territorial, Savoie, France
Jeanine Rakotobearisoa, Psychiatre, Paris, France Paul Nahoaniko, Consultant Expert en Génie Civil, Melun, France
Fanantenandrainy Ratsimbazafy : Business Analyst, Paris, France Arsène Bezara, Informaticien, Paris, France Roland Tarby, Citoyen, Cournon d’Auvergne, France
Jeanine Rambeloson, Citoyenne, Paris, France
Guy Vincère Rabesaotra, Mpiasam-panjakana, Paris, France. Henry René Rabesaotra, Retraité, Paris, France Myriame Rabesaotra née Razafiniaina, Retraitée, Paris, France
Carson Rock Rangers, Compositeur, Chercheur, Enseignant , Paris, France
Edson Maheva, Professeur, Académie de Clermont-Ferrand, France
Sophie Ranjamanarivo, Citoyenne, Port de Bouc, France
Marie-Clémence Andriamonta Paes, Producteur, Paris, France
Razakamanantsoa Naivo, Retraité, Vendôme, France
Miora Lala Andrianaivomanjato, Etudiante, Paris, France
Yodie Ramamonjisoa, Assistante, Paris, France
Roger Rakotoarivelo, Enseignant, Toulouse, France
Anthony Sergio Sanany Andriafaranirina, Etudiant, Paris, France
Roger M’Changama, Citoyen, Paris, France
Batsola Andrianjaka, Doctorante, Xi’an, Chine
Muriel Rakotomalala, Traductrice, Paris, France
Sahondra Rasolomanana, Créatrice, Paris, France Fano Rakotoarisoa, Enseignant, Montreuil, France
Désiré Todizara, Pharmacien, Paris, France Raphael Ratovoarinony, Economiste, Antananarivo, Madagasikara Vero Ranaivoson, Citoyenne, Paris, France
Zoelson Randrianindrina, Journaliste, Antananarivo, Madagasikara
Yoland Joseph, ancien Sénateur de Madagascar, La Réunion
Santatra Rasolomanana, Etudiante, Québec, Canada
Railovy Boyer, Souscripteur d’Assurance, Paris, France
Landihasina Ralisoa, Tananarive, Madagascar
Randianina Ravoajanahary, Vidéaste, Paris, France
Virginie Rasoarilala, Enseignante, Académie de Rennes, France
TAMBAZOTRA « VAHOAKA MALAGASY MIFEHY NY TANINY ILAINY HAMOKARANA »
Mijoro ivelan’i Madagasikara ny TAMBAZOTRA « VAHOAKA MALAGASY MIFEHY NY TANINY ILAINY HAMOKARANA », tambazotra hivondronan’ny teratany malagasy tsimialonjafy tsy manaiky lembenana manoloana ny fandrobàna ny Tanin-drazana izay Masina fa natokana – tsy hiadian-kevitra – hamelomana ny Firenena sy ny Taranaka. Hifanakalo hevitra sy hifanome tanana ho amin’izany tanjona izany amin’ny alalan’ity tambazotra ity ny Malagasy eto an-Tanindrazana sy ireo miavy ivelan’ny Nosy.
Ny heveriny fa asa maika tokony iaraha-misalahy aingana sy avy hatrany dia ny :
Hiaraha misalahy amin’ny mponina sy ny fikambanana any an-Tanindrazana hiaro sy hanavotra ny tany fananana malagasy ;
Hanapariaka amin’ny vahoaka sy fikambanana eran-tany ny tranga sy zava-misy any Madagasikara mba hanohanan’izy ireo ny tantsaha malagasy amin’ny ady atrehany ho fiarovana ny tany sy ny fananany ;
Hanaparitaka amin’ny malagasy isam-paritra ireo toe-java-misy toy izao mihatra amin’ny vahoaka hafa firenena koa : mba iaraha-mahatsapa ny tanjona kinendry, ny fomba fiasa ary ny loza mitatao amin’ny fanekena sy fampiharana ny fifampiraharahana toy izao nataon’i Daewoo izao. Izany no hatao dia ny hahamailo sy hampatsilo ny mponina sy tantsaha malagasy ka hahaizana miaro ny taniny sy ny hareny lalandava.
Hifanakalo sy hiara-hiasa amin’ny mponina eran-tany hanohitra ireo mpandroba ka hahay hiaro bebe kokoa hatrany ny tantsaha sy ny tany amam-pananany.
Raha maniry ny hifandray na hanatevin-daharana na hanohana na hanolotra faniriana manokana dia azo alefa amin’ity mailaka manaraka ity : patrimoinemalgache@gmail.com
Paris, 29 desambra 2008